အလွတ်တန်းပညာရှင် ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အချက်(၃)ချက်
အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ အလွတ်တန်းပညာရှင် တွေဟာလည်း အရေးပါတဲ့ နေရာမှာ ပါ၀င်လို့နေပါတယ်။ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အကြီးမားဆုံး အကျိုးကျေးဇူးကတော့ Flexibility ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့တစ်ချို့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်းတွေ ငှားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေက သင့်အလုပ်တွေကို ပိုမိုလွယ်ကူ မြန်ဆန်အောင် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ သင့်အနေဖြင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းတော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။
နမူနာ ပရောဂျက်တစ်ခု နဲ့ စတင်တာ အကောင်းဆုံးပါ
အလွတ်တန်းပညာရှင်တစ်ယောက်ကို မငှားရမ်းခင်မှာ အရင်က သူဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ Portfolio ကို အရင်ကြည့်ရှုလေ့လာ သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင့်အလုပ်အတွက် နမူနာ ပရောဂျက်တစ်ခုကို လုပ်ခိုင်းကြည့်တာမျိုး ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ စွယ်စုံရတဲ့ ပညာရှင်ရှိသလို တစ်ခါတလေမှာ သူတို့ရဲ့စပါယ်ရှယ်လစ် ပညာရပ်တစ်ခုပဲရတဲ့ ပညာရှင်တွေလည်း ရှိနေတာကြောင့် နမူနာ ပရောဂျက်တစ်ခု လုပ်ခိုင်းခြင်းဟာ သင်ငှားရမ်းမယ့် အလွတ်တန်းပညာရှင်မှာ သင့်လုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီတဲ့ အရည်အချင်းရှိမရှိ အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့သို့ နမူနာ ပရောဂျက်လုပ်ခိုင်းရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ အရည်အသွေးတွေကိုလည်း လေ့လာလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ သူလုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာ သပ်ရပ်မှုရှိရဲ့လား? လေးစားမှုရှိရဲ့လား? ဒါမှမဟုတ် ပြီးပြီးစီးစီးလုပ်တတ်တာလား? သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးအောင်ရော ဆောင်ရွက်နိုင်သလား? ဆိုတာတွေကိုလည်း တိုင်းတာနိုင်တာကြောင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်တစ်ဦးကို မငှားရမ်းခင်မှာ အသေးစား နမူနာ ပရောဂျက်တစ်ခုနဲ့ စတင်ခြင်းဟာ အသင့်တော်ဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့သော နမူနာ ပရောဂျက်တွေ လုပ်ခိုင်းလို့မရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့ ကိုယ်ငှားမယ့် အလွတ်တန်း ပညာရှင်ရဲ့ Portfolio ကိုကြည့်ပြီး သူ့ Portfolio ထဲကအတိုင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို လေ့လာ စုံစမ်းပြီးမှ စတင်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ မိမိလုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချက်အလတ် အပြည့်အစုံ ဖော်ပြပေးခြင်းဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များကို ရှာဖွေပါ
လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အလွတ်တန်းပညာရှင် ငှားရမ်းတော့မည်ဆိုပါက ယခုအချက်ကိုလည်း ချန်ခဲ့လို့ မရပါဘူးခင်ဗျာ။ ပုံမှန်အားဖြင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အချိန်ပြည့် ၀န်ထမ်းတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့မှာ အရည်အချင်းပြည့်၀နေလျှင်တောင်မှ လုပ်ငန်းရဲ့ သဘော သဘာ၀ကို ချက်ချင်းသိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါ့ကြောင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်များနှင့် အလုပ်လုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်အလက်များနှင့် လုပ်ငန်းဖော်ပြချက်များကို အသေးစိတ်တိကျစွာ ဖော်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ထိုထက် လိုအပ်လာပါက လူချင်းတွေ့ပြီးဖြစ်စေ၊ Video Chat ဖြင့်ဖြစ်စေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ရှင်းပြပေးသင့်ပါတယ်။ အချက်အလက်တိတိကျကျ ဖော်ပြထားခြင်းဟာ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေ အနေဖြင့်လည်း သူတို့နဲ့ သင့်တော်လား မသင့်တော်ဘူးလား ဆုံးဖြတ်နိုင်သလို၊ တကယ် အရည်အချင်းရှိတယ် အလွတ်တန်း ပညာရှင်တွေကိုလည်း အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ အချက်အလတ် အပြည့်အစုံ မဖော်ပြထားခြင်းကြောင့် မိမိပရောဂျက်ကို လာလျှောက်မယ့်သူ မရှိတာတို့၊ လာလျှောက်သော်လည်း ကိုယ့်ပရောဂျက်နဲ့ မကိုက်ညီတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ သူတို့နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး အလိုက်ဖက်ဆုံး ပရောဂျက်တွေကိုသာ ရွေးချယ်တတ်တာမို့ သင့်၏ ပရောဂျက်ကို အချက်လတ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြထားခြင်းနဲ့ စတင်လိုက်ပါနော်!
အဆင်ပြေဆုံး Deadlines သတ်မှတ်နည်း
နောက်ထပ် သတိထားစရာ အချက်တစ်ခုလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ အလွတ်တန်း ပညာရှင် တွေဟာ သင့်ပရောဂျက်တစ်ခုပဲ လုပ်ကိုင် နေတာမဟုတ်ပါဘူ။ ပရောက်ဂျက်တွေအများကြီးကို လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းမစခင်မှာ ကတည်းက သူတို့နဲ့ ညှိနှိုင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပရောဂျက်အတွက် Deadline သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို အရင်ဆုံး ကိုယ့် ပရောဂျက်အတွက် အချက်အလတ် အပြည့်အစုံကိုပေးသင့်ပြီး ဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် ကို ရှင်းပြပေးထား ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ အလွတ်တန်းပညာရှင်အနေဖြင့် သင့်အလုပ်တွေကို ဘယ်နာရီ၊ ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်း ပြီးစီးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့သို့ အချက်အလတ် အပြည့်အစုံမပေးပဲ ဘယ်အချိန်အတွင်းပြီးအောင်လုပ်ပေးပါ ဆိုရင်တော့ မိမိအတွက် အကောင်းဆုံးရလဒ် တွေရရှိဖို့ ရာခိုင်နှုန်းနည်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့သော အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ လုပ်အားခကို အချိန်နာရီဖြင့် ယူတတ်သလို ပရောဂျက်တစ်ခုလုံးစာအတွက် Fixed Price ဖြင့်လည်း ယူတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်နှင့် အရင်ဆုံး ညှိနှိုင်းခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ညှိနှိုင်းပြီးသည့်တိုင်အောင် အလွတ်တန်းပညာရှင် နှင့် အဆက်သွယ်မပြတ်အောင်နေသင့်ပါတယ်။ အလုပ်အပ်ပြီး ပြီးရောဆိုပြီး ပစ်မထားသင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်ပရောဂျက်ရဲ့ အခြေအနေလေးတွေကို အမြဲမပြတ် စောင့်ကြည့်ပေးနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ အလွတ်တန်းပညာရှင်နှင့် ကိုယ့်ရဲ့ ပရောဂျက်ကြားလစ်ဟာမသွားပဲ အလုပ်တွေ တိကျမြန်ဆန်စွာ ပြီးမြောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအစီစဉ်တကျျသာ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုလျှင်တော့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ သင့်အတွက် အရမ်းကို အသုံး၀င်ပြီး များစွာအထောက်ကူဖြစ်စေမှာ မလွဲပါဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အတွေးကိုယ်စီ ရှိကြတဲ့အတွက် တခါတရံ သင့်ရဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင် အပေါ် ဖိအားအရမ်း မပေးသင့်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အတွေး၊ အိုင်ဒီယာတွေကိုလည်း လက်ခံသင့်ပါတယ်။ ဒါမှဒါကြီး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုပြီးတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိကြသလို အတွေ့အကြုံလည်း ပိုမိုများပြားနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုပြီး မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံ၊ မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ အတွေးတွေကို ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုလျှင် သင့်အတွက် အကူအညီ အကောင်အပံ့ကောင်းတွေ များစွာရရှိနိုင်ကြောင်း ရေးသားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေ။